UGoogle unikezela abanye ababhalisile kwi-tv ​​ye-youtube simahla izixhobo ze4k
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo UGoogle unikezela abanye ababhalisile be-YouTube kwi-TiVo Stream izixhobo ze-4K
UGoogle noRoku zezi phakathi kwembambano echaphazela ababhalisile be-YouTube TV. Kuyabonakala ukuba, uthethathethwano phakathi kwezi nkampani zimbini aluphumelelanga kwaye uRoku uthatha isigqibo sokususa i-YouTube TV kumnikelo wayo, nangona kunjalo UGoogle ufumene indawo yokusebenza kwiintsuku ezimbalwa kamva.
Akucaci nokuba akwenziwanga Ababhalisi be-YouTube TV Ityala labo kule mpikiswano kukuba & ngoku bafumene isixhobo simahla seTiVo Stream 4K, kodwa nokuba ayisiyiyo imeko, iiapos zisengaphezulu kokwamkeleka simahla.
Ngelishwa, uGoogle akakazukubonelela ngeenkcukacha malunga nokukhuthaza, ke asazi ukuba sande kangakanani. Abantu kwi 9to5google Ufumene ubungqina bokuba uGoogle ngoku ubonelela ngeekhowudi zesaphulelo kubabhalisi be-YouTube TV abanokuhlawulelwa kwivenkile yeTiVo ukuze bafumane i-dongle yokusasaza simahla.
Ukuqinisekisa ukuba amalungu ethu anyanisekileyo e-YouTube anamava amahle okubukela (kubandakanya ukubukela umxholo we-4K kwinkonzo yethu yokongeza entsha ngokuzithandela eza kungekudala!), Sifuna ukukunika isixhobo seTiVo Stream samahhala se4K.
Ngokwesiqhelo, isixhobo seTiVo Stream 4K sixabisa i- $ 40, kodwa Okwangoku ivenkile inikezela ngesaphulelo se- $ 10 . Ngokucacileyo, abo banethamsanqa lokufumana uphando & iapos; imeyile enekhowudi yesaphulelo iya kuba nokufumana simahla.
uhlaziyo lwemoto x olusulungekileyo